Syncari: Cross-Functional Data များကိုစုစည်းစီမံခြင်း၊ လုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနေရာတိုင်းမှာဖြန့်ဝေပါ။ | Martech Zone
ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ CRM၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်၊ ERP နှင့်အခြားတိမ်တိုက်ဒေတာအရင်းအမြစ်များတွင်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကိုနစ်မြှုပ်နေကြသည်။ အရေးပါသည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည်မည်သည့်အချက်အလက်သည်အမှန်တရားကိုကိုယ်စားပြုသည်ကိုသဘောမတူနိုင်ပါကစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားပြီးဝင်ငွေရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရန်ခက်ခဲသည်။ Syncari သည်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေလိုသည် အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းနှင့်ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း အဘယ်သူသည်အစဉ်မပြတ်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏လမ်းအတွက်ရတဲ့ဒေတာနှင့်အတူရုန်းကန်။
Syncari သည်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အလိုအလျောက်နှင့်ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကိုပြုလုပ်သည်။ သူတို့၏ပြီးပြည့်စုံသောဒေတာပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ထိပ်တန်းစနစ်အားလုံးမှအချက်အလက်များကိုစုစည်း၊ Workato သို့မဟုတ် MuleSoft နှင့်မတူဘဲ Syncari သည်ကျွမ်းကျင်သူများသည်၎င်းတို့ယုံကြည်ရသောဒေတာနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်ကူညီရန် codeless data management ။ ထို့နောက်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းသည်ယုံကြည်ရသောအချက်အလက်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဌာနတိုင်းသို့ပြန်လည်ဖြန့်ဝေသည် အမှန်တရား၏ရင်းမြစ် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချက်အလက်ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်ဤစနစ်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏အဖွဲ့များအားအချက်အလက်ကြွယ်ဝမှု၊ ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုဗဟိုမှ စုစည်း၍ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လက်စွဲအချက်အလက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှလွတ်မြောက်စေသည်။
Syncari သည်လုပ်ငန်းဒေတာစုပုံကိုခေတ်မီစေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဆုံးမှအဆုံးသို့ပေါင်းစည်းမှုကိုအမှန်တကယ်ရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်အချက်အလက်စုဆောင်းထားသည့် FiveTran (ဥပမာ Snowflake) နှင့် Census / Hightouch တို့၏စွမ်းရည်ကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစပ်ထားသည်။ Syncari သည်အချက်အလက်များကို ဦး စားပေးချဉ်းကပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်းကိုယဉ်ပါးစေရန်လူများအားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အလိုအလျောက်နှင့်ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုကိုတစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုထဲသို့ပေါင်းစပ်လိုက်သည်။
စုစည်းထားသောဒေတာပုံစံ - စနစ်တိုင်းသည်ဖောက်သည်များကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားသောနည်းဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ဤပုံမှန်လုပ်ပြီးပြီ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စနစ်များအားလုံးတူညီသောဘာသာစကားပြောဆိုနိုင်။
Multi-directional ထပ်တူပြုခြင်း - Cross-system အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်းငံ့ထားသောငွေပေးငွေယူအင်ဂျင်နှင့်အဆက်ပြတ်စေပြီးချိတ်ဆက်ထားသောစနစ်တိုင်းတွင်ဒေတာများကိုပြည်နယ်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးထိန်းချုပ်သည်။
အလိုအလျောက် schema စီမံခန့်ခွဲမှု နယ်ပယ်အသစ်များသည်မည်သည့်ဒေတာအရင်းအမြစ်တွင်မဆိုထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းခံရသောအခါ Syncari သည်သက်ရောက်မှုရှိသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုအလိုအလျောက် update လုပ်ပေးသည်။ အပြောင်းအလဲများကိုချိုးဖောက်နှုတ်ဆက်!
ဖြန့်ဝေသည့်အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု - Syncari တွင်ဖန်တီးခဲ့သောအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဒေတာပေါ်လစီများသည်မတူညီသောဒေတာမော်ဒယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အချက်အလက်ရင်းမြစ်အားလုံးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။
ရိုးရာမတူဘဲ connectorsSyncari Synapses သည် end system schemas ကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်သည်။ merge နှင့် soft-delete ကဲ့သို့သောတိကျသောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်နက်ရှိုင်းသောပေါင်းစည်းမှုကိုပေးသည်။ ချိတ်ဆက်ထားသည့် Synapse တိုင်းတွင် schema ပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစီမံသည်။ သူတို့ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုစာကြည့်တိုက်တွင် Airtable, Amazon S3, Amazon Redshift, Amzon Kinesis, Amplitude, Drift, Eloqua, Intercom, Microsoft Dynamics 365, Freshworks CRM, Gainsight, Google BigQuery, Google Sheets, Hubspot, Jira, Marketo, Mixpanel, MySQL, NetSuite တို့ပါဝင်သည် , Outreach, Salesforce Pardot, Pendo, PostgreSQL, Salesforce CRM, Sage Intactt, SalesLoft, Snowflake, Workday, Xero, Zendesk နှင့် Zuoro ။
Syncari Demo တောင်းဆိုရန်
Tags: အမေဇုံ Redshiftamazon s3လွှဲခွင်Amzon Kinesisအလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှုသန်းခေါင်စာရင်းကုလားcodeless ပေါင်းစည်းမှုဒေတာအလိုအလျောက်ဒေတာပေါင်းစည်းမှုဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းဒေတာဂိုဒေါင်Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီးပေါင်းစည်းမှုဆွဲယူ dropပျံ့ဆွဲဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေတာငါးပါးFreshworks CRMainsGoogle BigQueryGoogle က Sheet များချစ်သူhubspot ဖြစ်သည်ပေါင်းစည်းမှုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးJiraဒေတာကိုစီမံခန့်ခွဲစျေးကြီးMicrosoft ဒိုင်းနမစ် 365Mixpanelmysqlနက်ဖြန်အဝေးရောက်PendoPostgreSQLSage နဂိုအတိုင်းအရောင်းအင်အား crmရောင်းသူအရိယာမိုးစအမှန်တရား၏ရင်းမြစ်လုပ်အားခXerozendeskZuora ပါ
မေလ 13, 2021 မှာ 3: 03 pm တွင်
ငါတို့အားဖုံးအုပ်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤသည်အလွန်ကောင်းစွာရေးသားခဲ့သည်! အများကြီးကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ခြင်းနှင့်ငါသည်သင်တို့ကိုငါမဆိုလမ်းအတွက်ကူညီနိုင်လျှင်, ထွက်ရောက်ရှိဖို့တှနျ့ဆုတျပါဘူး။
မေလ 14, 2021 မှာ 4: 25 pm တွင်
မှတ်စုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နစ်ခ်! ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာခွဲဝေရန်မျှော်လင့်လျက် - ကျွန်ုပ်သည်အချို့သောအပေါင်းအသင်းများထံအချက်အလက်အချို့ပို့ပြီးဖြစ်သည်။